Juventus oo Dheereysatay Hogaanka Horyaalka Talyaaniga iyo Natiijooyinka Kulamadii Laga Ciyaaray – Gool FM
Juventus oo Dheereysatay Hogaanka Horyaalka Talyaaniga iyo Natiijooyinka Kulamadii Laga Ciyaaray
(Serie A ) 16 April 2018. Kooxda Juventus ayaa lix dhibcood ku qabatay hogaanka horyaalka talyaaniga kadib guushii ay ka gaareen naadiga Sampdoria.
Laacibka Douglas Costa, oo badal kusoo galay kulanka daqiiqadii 43-aad , ayaa caawiyay dhamaan sedaxda gool.
Mario Mandzukic ayaa goolka hore kooxda guriga u dhaliyay kadib karoos uu soo laaday Costa dhamaadka kaambiyaha koowaad ,iyadoo uu goolka labaad madax ku dhaliyay Benedikt Howedes waana goolkiisii ugu horeeyay ee u dhaliyaa kooxda Juve.
Ciyaariyahan Costa oo dhan walba kulan ka muuqday ayaa markan goolka sedaxaad ka cawaaiyay Sami Khedira.
Juventus kaliya afar dhibic ayey lumisay tan iyo 19 November,waxeeyna ciyaarta soo aadan la dheeli doonaan Napoli.
Kooxda Turin ayaa markii todobaad xiriir ah ku guuleysan karta Serie A inkastoo Natiijo qalbi jab ah ay kaga hareen tartanka Champions League todobaadkii hore.
Dhanka kale kooxda Napoli oo horaantii xili ciyaareedkan aheyd hogaamiyaasha ayaa dhumisay fursad ay ugu dhawaan la haayeen Juventus kadib bar baro 0-0 ah oo ay la gashay AC Milan.
Iyagu waxeey u muuqan kareen kuwo guuleysan kaaray dhamaadka ciyaarta markii laacibka Arkadiusz Milik darbad cajiib aheyd uu ka badbaadiyay goolhaye Gianluigi Donnarumma,oo kulankii 100 ee horyaalka talyaaniga saftay xili uu jiro 19 sano.
Kooxda gaartay Afar dhamaadka Koobka Champions League ee Roma ayaa bar baro laga gashay dhigooda ay ku xafiltamaan caasimada ee. Lazio, waxaana kulanka laga saaray Stefan Radu kadib markii uu qaatay labo jaalo 10-kii daqiiqo ee dheesha u dambeysay balse Edin Dzeko ayaa sedax fursay helay taas uu guul ku siin karay kooxdiisa Roma, waxaana kamid ahaa madax uu birta ku dhuftay.
NATIIJO: Real Madrid oo Garaacday Malaga Xili Free Kick Qurux Badan uu Dhalshay Isco+SAWIRO
Kooxda Paris St-Germain oo Xaqiijisay Hanashada Horyaalka France ee Ligue 1